ဓာတ်အားသုံးစွဲသူ တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ် များလာတာနဲ့အမျှ ဓာတ်လိုက်မှုဖြစ်စဉ်တွေ ပိုများလာပြီး သေဆုံး၊ ဒဏ်ရာရ စာရင်းတွေကတော့-
- ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ ဓာတ်လိုက်မှု ဖြစ်စဉ် ၈၄ ခုမှာ ဒဏ်ရာရ ၂၄ ဦး၊ သေဆုံး ၆၁ ဦး။
- ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ ဓာတ်လိုက်မှု ဖြစ်စဉ် ၁၀၁ ခုမှာ ဒဏ်ရာရ ၂၂ ဦး၊ သေဆုံး ၈၉ ဦး။
- ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ ဓာတ်လိုက်မှု ဖြစ်စဉ် ၁၁၀ ခုမှာ ဒဏ်ရာရ ၂၆ ဦး၊ သေဆုံး ၈၄ ဦး။
- ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ ဓာတ်လိုက်မှု ဖြစ်စဉ် ၁၁၄ ခုမှာ ဒဏ်ရာရ ၃၇ ဦး၊ သေဆုံး ၈၉ ဦး။
- ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ ဓာတ်လိုက်မှု ဖြစ်စဉ် ၁၃၃ ခုမှာ ဒဏ်ရာရ ၄၃ ဦး၊ သေဆုံး ၁၀၇ ဦး။
- ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ ဓာတ်လိုက်မှု ဖြစ်စဉ် ၉၇ ခုမှာ ဒဏ်ရာရ ၂၅ ဦး၊ သေဆုံး ၉၁ ဦး။
- ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ ဓာတ်လိုက်မှု ဖြစ်စဉ် ၁၁၃ ခုမှာ ဒဏ်ရာရ ၂၀ ဦး၊ သေဆုံး ၁၀၇ ဦး။
- ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လအထိ ဓာတ်လိုက်မှု ဖြစ်စဉ် ၅၈ ခုမှာ ဒဏ်ရာရ ၇ ဦး၊ သေဆုံး ၅၅ ဦး။
ဓာတ်လိုက်မှု ဖြစ်စဉ်များကို အမျိုးအစားအားဖြင့် ၈ မျိုးခွဲခြားထားပါတယ်။ ဓာတ်လိုက် မှုဖြစ်စဉ် အများဆုံးမှစ၍ ကြည့်ပါက ……….
(၁) လျှပ်စစ်စီးဝင်နိုင်သော ပစ္စည်းများ လိုင်းအောက်အနီးတွင် ကိုင်တွယ်မိခြင်းကြောင့် ဓာတ်လိုက်ခြင်း (အများဆုံး)
(၂) စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ နေအိမ်များတွင် အသုံးပြုသော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ စနစ်တကျ တပ်ဆင်သုံးစွဲမှုမရှိခြင်းကြောင့် ဓာတ်လိုက်ခြင်း (ဒုတိယ အများဆုံး)
(၃) Service ကြိုးကြောင့် ဓာတ်လိုက်ခြင်း (တတိယ အများဆုံး)
(၄) ဓာတ်အားလိုင်းကြိုးများ ပြတ်ကျခြင်းကြောင့် ဓာတ်လိုက်ခြင်း (စတုတ္ထ အများဆုံး)
(၅) ဓာတ်အားလိုင်းများ ပြုပြင်ရာတွင် လည်းကောင်း၊ လိုင်းအနီး လူ၊ ပစ္စည်းများ ဝင်ရောက်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ စက်ကွင်းအတွင်းတွင် ကျရောက်၍ ဓာတ်လိုက်ခြင်း (ပဉ္စမအများဆုံး)
(၆) မဟာဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ဗို့အားမြင့် ဓာတ်အားလိုင်းများ၏ တိုင်ပေါ်သို့ တက်ခြင်း၊ ဓာတ်ကြိုးများကို စမ်းသပ်သည့် သဘောဖြင့် ထိခြင်းတို့ကြောင့်ဓာတ်လိုက်ခြင်း (ဆဌမ အများဆုံး)
(၇) ဓာတ်ရုံအတွင်း လျှပ်စစ်ပြုပြင်ရာမှ လျှပ်ပန်းခံရခြင်း (သတ္တမ အများဆုံး)
(၈) မြေအောက် ဓာတ်ကြိုးများ၊ ဓာတ်အားလိုင်းများနှင့် ပေါက်မိ၊ ထိမိ၍ Flash Over ဖြစ်ရာမှ ဓာတ်လိုက်ခြင်း (အဌမ အများဆုံး)
လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနက ဖြန့်ဝေတဲ့ လက်ကမ်းစာစောင်များမှာ မိမိတို့ နေရာအနေအထားအလိုက် သတိပြုရမဲ့ အချက်တွေကို အောက်ပါအတိုင်း အပိုင်းလိုက်ခွဲပြီး ဖော်ပြထားတယ် -
(၁) အိမ်တွင်း လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ အသုံးပြုလျှင် သတိပြုရန် အချက်များ။
(၂) ဓာတ်အားလိုင်းကြိုးများ၊ ဆားဗစ်ကြိုး (ဓာတ်တိုင်မှ အိမ်သို့ သွယ်တန်းသောကြိုး) များနှင့် ပတ်သက်၍ သတိပြုရန် အချက်များ။
(၃) နေအိမ်ခြံဝန်းအတွင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်သို့ သွယ်တန်းထားသော မီးကြိုးများနှင့် ပတ်သက်၍ သတိပြုရန် အချက်များ။
(၄) အဆောက်အဦများ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ဓာတ်အားလိုင်းအနီးနှင့် ဓာတ်အားလိုင်း အောက်တွင် အလုပ်လုပ်ရာ၌ သတိပြုလိုက်နာရန် အချက်များ။
(၅) ဓာတ်လိုက်နေသူအား ကယ်တင်နိုင်ရန် နည်းလမ်းနှင့် ဓာတ်လိုက်ခံထားရသူအား ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်များ။
လူတိုင်း သိထားသင့်တာပေါ့ ....... ငါလည်း ငါ့မိသားစုကို ရှင်းပြဖို့နဲ့ အိမ်နီးနားချင်းတွေ ကို ဖြန့်ဝေဖို့ လက်ကမ်းစာစောင်တွေ ပေးပါအုံးကွာ ……… ငါသိသလို ငါ့မိသားစု၊ ငါ့လမ်းထဲက လူတွေသိအောင် ဖြန့်ပေးလိုက်မယ် …….
အေးကွာ …… သာဓုပါ …… ငွေမကုန်ဘဲ အကျိုးရှိစွာနဲ့ လျှပ်စစ်အန္တရာယ်က ကာကွယ်ပေးနိုင်အောင် လျှပ်စစ်အသိတွေ ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးလို့ ထာဝရကုသိုလ် တစ်မျိုးပေါ့ကွာ ………